XOG MUHIIM AH: Tirada Kooxaha Ka Qayb-gelaya, Lacagta Laga Helayo, Qaabka Loo Ciyaarayo Iyo Xogta Tartanka Cusub Ee UEFA Super League - Laacib
HomeWararka Champions LeagueXOG MUHIIM AH: Tirada Kooxaha Ka Qayb-gelaya, Lacagta Laga Helayo, Qaabka Loo Ciyaarayo Iyo Xogta Tartanka Cusub Ee UEFA Super League
XOG MUHIIM AH: Tirada Kooxaha Ka Qayb-gelaya, Lacagta Laga Helayo, Qaabka Loo Ciyaarayo Iyo Xogta Tartanka Cusub Ee UEFA Super League
Tartan cusub oo loogu magac daray UEFA Super League ayay ansixiyeen kooxaha ugu waaweyn kubadda cagta ee Yurub, kaas oo ay kaga go’ayaan Champions League, ayna ka cabaadeen xidhiidhada UEFA iyo Premier League.
Kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa saxeexay abuuritaanka tartanka Super League oo ay lacago aad ugu badan ka heli doonaan naadiyada ka qayb-gelaya, kaas oo wiiqi doona xiisihii iyo dhaqaalihii uu heli jiray Champions League.
UEFA ayaa iyaduna maalinta berri ah waxay ansixin doontaa isbeddello ay ku samaynayso Champions League laga bilaabo sannadka 2024, kaas oo ay ku kordhinayso tirada kooxaha, isla markaana waxyaabo kale ay kusoo kordhinayso.
Imisa kooxood ayaa ka qayb-geaya tartanak Super League?
Sida uu qoray wargeyska The Times, waxa tartankan cusub ka qayb-geli doona 20 kooxood oo ah kuwa ugu waaweyn qaaradda Yurub ee inta badan aad magacyadooda maqasho, ayna hubaal tahay in ay ku jirto kooxda aad taageerto. 15 ka mid ah kooxahan ayaa noqon doona aas-aaseyaasha ay haddaba 11 ka mid ahi saxeexeen, waxaana soo raaci doona shan kooxood oo lagu casuumi doono in ay ka qayb-galaan tartanka. Wali ma cadda sida shanta kooxood ee lagu casuumayo loosoo xulan doono.
Sidee ayuu noqon doonaa qaabka tartanku?
20ka kooxood ayaa loo qaybin doonaa laba group oo midkiiba ka kooban yahay 10 kooxood. Hormo walba waxa kasoo bixi doona afarta kooxood ee ugu dhibcaha badan oo u gudbi doona wareegga siddeedda, halkaas oo semi-finalka ay iman doonaan afar kooxood. Ciyaarta ugu dambaysa ee finalka ayaa noqon doonta mid kulan kaliya lagu go’aamiyo.
Kooxahee ka qayb-gelaya tartanka cusub ee Super League
Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, AC Milan iyo Inter ayaa noqday 12ka kooxood ee loo arko in ay tartankan bud-dhigga u yihiin, waxaana iyaguna qalinka ku duugay oo saxeexay Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain.
Man City ayaanu magaceedu ku jirin kooxihii caawa la shaaciyey in ay saxeexeen qorshaha cusub
Miyey kooxahani joojin doonaan in ay ciyaaraan tartamada maxalliga ah?
Maya. Shirarkii ugu horreeyey ee ay yeesheen, waxay ugu yaraan kooxahani muujiyeen in ay doonayaan in ay sii ciyaaraan tartamada maxalliga ah ee horyaallada dalalkooda. Laakiin ciyaarahan iyo sida ay isku waafaqayaan horyaallada maxalliga ah ayaa khilaaf cusub abuuray, lamana oga sida ay ku xalliyeen.
Lacagta ay kooxuhu helayaan
Tartankan oo bilaabmaya xilli ciyaareedka 2023-24 ayaa waxa lagu maalgelinayaa lacag dhan $6 bilyan oo dollar oo u dhiganta £4.3 bilyan oo Gini, taas oo loo qaybin doono kooxaha.